प्रचण्डको ब्रिफिङ – 'ओलीले बैठकबाट होइन महाधिवेशनबाट विवाद समाधान गर्ने अडान राख्नुभो'
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनबाट नै विवादको हल गर्ने भन्दै अन्य विषयमा केही कुरा गर्न नचाहेको बताएका छन् ।
आइतवार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच करीब ३ घण्टा छलफल भएको थियो । छलफलमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसमेत सहभागी थिए ।
ओलीसँग भएको छलफलबारे अध्यक्ष प्रचण्डले आफूनिकटका नेताहरूलाई आइतवार साँझ खुमलटार बोलाएर ब्रिफिङ गरेका थिए ।
‘उहाँ(ओली)ले पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरू सचिवालयमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने तर नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठक भन्दा पनि महाधिवेशनमै छलफल गरेर अघि बढ्ने अडान लिनुभयो,’ प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
ब्रिफिङमा प्रचण्डले आफूले नियमित बैठक नरोक्ने, उठेका प्रश्नहरूबारे छलफल गर्ने र आवश्यक परे केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत समस्या हल गर्ने प्रस्ताव राखेको बताए ।
ब्रिफिङमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र माधवकुमार नेपालसँगै पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले ठोस सहमतिको वातावरण नबनिसकेको बताए । लोकान्तरसँग प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘पार्टी एक त रहन्छ तर त्यसका लागि हुनुपर्ने सहमतिको अहिलेसम्म ठोस वातावरण बनिसकेको छैन । अध्यक्ष प्रचण्डले सोमवार पुनः वार्ता गर्ने गरी आफू फर्केर आएको बताउनुभयो ।’
प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी फुटको संघारमा छ भनेर भन्न नमिल्नेसमेत बताए । ‘अहिले पार्टी फुटको संघारमा छ भनेर भन्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘एकजुट भएर अघि बढ्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । तर अहिलेसम्म सहमतिको ठोस खाका तयार भइसकेको छैन । अध्यक्षद्वयबीच संवादको शुरुवात भएको छ यसलाई सकारात्मक मानौं ।’
विगत केही महिनादेखि देखिएको नेकपाभित्रको संकट सहमतिउन्मुख भएको भनिएपनि अहिलेसम्म कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन ।
गत फागुनमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णयलाई ओलीले चुनौती दिएपछि नेकपाभित्र शक्तिसंघर्ष चुलिएको हो ।
त्यसयता नेकपाभित्र विभिन्न आरोह अवरोह आए । असार १० गतेबाट शुरू भएको नेकपाको पाचौं स्थायी कमिटी बैठक पनि विवादकै कारण बन्धक बनेको छ ।
असार १४ गते ओलीले भारतसहित नेकपाकै केही नेताहरू आफ्नो सरकार ढलाउन लागिपरेको आरोप लगाएका थिए । ओलीको उक्त आरोपपछि बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूले उनको राजीनामा मागेका थिए ।
ओलीले आफूले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बरू महाधिवेशनबाट अध्यक्षको पद हस्तान्तरण गर्ने र आमनिर्वाचनबाट प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गर्ने अडान लिइरहेका छन् ।
ओलीको निरंकुशता चुट्कीको भरमा अन्त्य हुनेछ : प्रचण्ड
बुटवलमा यस्तो देखियो प्रचण्ड-नेपाल समूहको शक्ति प्रद...
ओलीको दायाँबायाँ बादल र रायमाझी नामका ढेडु बाँद...
आज देशभर कतिले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप ? (प्रदेशगत विवरणसहित)
महासङ्घले दियो पूर्वअध्यक्षलाई विभिन्न जिम्मेवारी, कसले के पाए ?
लक-डाउनमा आफ्नै बडीगार्डसँग प्रेममा परेपछि पामेलाले गरिन् चौथो बिहे
माडीको पुल बनाउन सहमति दियो निकुञ्जले
असल नेता कसलाई भनिन्छ ? चाणक्यले यसरी व्याख्या गरे चार गुण
कम हुँदै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या
कोरोनाको खोप आएपछि पर्यटन व्यवसायी उत्साहित